Fitsaboana proton homamiadana miverimberina & faharoa - Proton CA
Miady amin'ny homamiadana miverimberina & faharoa
Fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana miverimberina & faharoa
Manantena izahay fa tsy hitranga na oviana na oviana izany, saingy indraindray - na dia amin'ny fikarakarana sy teknolojia tsara indrindra aza - miverina ny homamiadana. Raha izany no izy, miadia miady amin'ny fitsaboana fitsaboana taratra efa mandroso ankehitriny. Ny haitao fanodinana beam-panodinam-bolo miovaova dia tsy mitovitovy tsara ary ahafahan'ireo dokotera mikendry ny homamiadana izay niverina na niparitaka tamin'ny taratra fatra-dra be.
Raha ampitahaina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha, ny teknolojia fanodinam-baravarankely amin'ny alàlan'ny famerenam-bolo ny tariby dia manolotra fitsaboana ara-taratra ho an'ny homamiadana miverimberina sy faharoa ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe tokoa izany ho an'ny marary efa tratran'ny taratra voalohany satria ny taratra ara-dalàna dia tsy mahazaka taratra vitsivitsy fotsiny alohan'ny hanaovana ny fanimbana tsy azo ovana. Ny fiparitahana tsy mifantoka amin'ny fivontosana dia mametraka ny taolam-batana sy taova mahasalama ihany koa hanakaiky ny fatra farany mety aminy. Amin'ny fampifantohana tsara ny fatra sy ny hamafiny, ny fitsaboana proton dia manampy amin'ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra ary koa mampiakatra ny mety hisian'ny marary mameno fitsaboana amin'ny fanelingelenana na fahatarana kely kokoa.
Kansera miverimberina & faharoa
Ny homamiadana miverimberina eo an-toerana dia mivoaka ao amin'ny toerana mitovy ihany na akaiky azy
Ny homamiadana miverimberina amin'ny faritra izay miverina na mitombo dia mijaly lymph na hozatra manodidina
Ny homamiadana miverimberina lava (kankana metastika) izay hita any amin'ny taova na ny taolana lavitra ny fivontosana tany am-boalohany
Ny homamiadana faharoa (fivontosana faharoa) dia mitovy amin'ny karazana homamiadana ary mitranga any amin'ny faritra izay notsaboina teo aloha
Arovy ny taolanao sy ny taolanao
Mampihena ny voka-dratsin'ny fitsaboana
Mampidina ny loza mety hitranga amin'ny fahasimbana maharitra na ny homamiadana vaovao noho ny taratra
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana miverimberina & faharoa
Ny fitsaboana proton mivaingana matetika no fomba tsara indrindra hitsaboana ny fivontosana miverimberina sy faharoa ao amin'ny faritra izay notsinihina fitsaboana taloha. Ny tavy salama manodidina ny fivontosana miverimberina dia tsy "manadino" tanteraka ny fatra amin'ny tara-pahazavana teo aloha. Ny fitsaboana Proton dia mamela ny dokotera amin'ny fomba malalaka kokoa amin'ny famindran'ny taratra lava be sy hampihenana ny fatra amin'ny sela fahasalamana sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fihenan'ny fihanaky ny taratra mahasalama dia zava-dehibe tokoa satria misy taratra mihena be dia be ny taratra ara-dalàna azo raisina mandritra ny androm-piainanao. Izay taratra rehetra ankoatry ny fatra farany be indrindra dia hampitombo ny loza mety hateraky ny fahasimbana.
Na ny marary izay efa nahatratra ny habetsaky ny taratra X-ray be indrindra aza dia mety ho mpifaninana amin'ny fitsaboana proton satria mitombo kely ny ratra sy ny fahasimbana amin'ny manodidina sy ny taova mahasalama.
Ny fitsaboana ny homamiadana izay niverina, izay antsoina koa hoe homamiadana faharoa, dia miankina amin'ny antony maromaro. Anisan'izany: ny karazana sy ny ambaratonga homamiadana, oviana ary aiza no miverina, taona, ny fahasalamana sy ny filan'ny tena manokana. Ny fitsaboana amin'ny fandidiana, ny fitsaboana simika ary ny taratra dia mety hilaina amin'ny fitsaboana kansera amin'ny laoniny sy faharoa. Ankoatr'izany, ny fitsaboana ny homamiadana teo aloha sy ny fiparitahan'ny taratra dia mety hisy fiantraikany amin'ny safidinao fitsaboana ankehitriny.
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra mandritra ny fotoana maharitra sy atahorana noho ny fahasimban'ny taratra sy ny taova manodidina. Mety hampihena ny vintana fanampiny ho an'ny homamiadana faharoa any aoriana any amin'ny fiainana noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ireo sela sy taova mahasalama ireto.
Fikarohana fikarohana manohana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana miverimberina & faharoa
Fitsaboana aretin-jiro, proton ary ny homamiadana faharoa
Fitsaboana ny "scan-radiation proton radiation" ho an'ny meningiomas intracranial miverimberina
Karsomaoma nasopharyngeal: fitsaboana averimberina miaraka amin'ny fitsaboana proton conformal - famakafakana antontan-tariby mihena